Hupenyu detector Fekitori - China Hupenyu detector Vagadziri, Vatengesi
YSR Kuputika-chiratidzo kwakawanda-modhi radar hupenyu detector
Nhanganyaya Kuputika -uchapupu hwakawanda-modhi radar hupenyu hwekutarisa ndeye-matatu-mativi macomposite anonunura emergency kubva kurira, frequency, magetsi, magnetism, wave uye mamwe matekinoroji mune imwe, uchishandisa kurira kwezwi, kuona kwe microwave, magetsi emagetsi induction, kuona vhidhiyo uye mamwe maitiro. Hupenyu kutsvaga uye kununura system. Iyo yekuputika-chiratidzo yakawanda-modhi radar yehupenyu detector ine yekuputika-chiratidzo isina waya vhidhiyo telescopic detector, yekuputika-chiratidzo radar hupenyu detector, iyo ...
YSR Radar Hupenyu Locator inoshandisa Ultra wideband (UWB) radar tekinoroji kusimudzira mikana yekununura zvichitevera kupunzika kwechimiro nekuda kwemamiriro ekunze, moto kana kurwiswa kwakaipisisa, mafashama, mafashama emvura, kudengenyeka kwenyika kana dzimwe njodzi dzinongoitika dzega. Iyo yehupenyu locator yakanyatsokodzera kununura hupenyu, kutsvaga avo vanobatwa nekuona kunyangwe iwo madiki madiki ekufema asina kudzika. Iyo yekushanda renji iri pamusoro pe25m. YSR Radar hupenyu locator yakaratidza kuve chishandiso chinoshanda mukuona zviratidzo zvehupenyu sekufema uye ...
V9 Kuputika-chiratidzo chisina waya odhiyo uye vhidhiyo yehupenyu detector
Tsananguro yechigadzirwa Iyo odhiyo uye vhidhiyo yehupenyu detector ndicho chinotungamira chigadzirwa chechizvarwa chitsva cheaudio uye vhidhiyo tekinoroji kutsvaga nzvimbo yevanopona. Iyo odhiyo uye vhidhiyo yehupenyu detector ndiwo maziso nenzeve dzevanonunura timu mune kutsemuka kwematongo kuti avabatsire kunyatso tsvaga vakapona. Inozivikanwa nekushanda kwayo uye nemazvo. Kungobaya kamera mukamuri diki, vanunuri vanogona kukurumidza kuona nzvimbo yevanopona pavanenge vachinyatsoongorora ...
V5 Audio & vhidhiyo hupenyu detector
V5, inoshandiswa kutsvaga hupenyu huri pasi pematongo. Yakave yakasimbiswa neNational Fire Equipment Quality Supervision uye Yekuongorora Center. V5 vhidhiyo yehupenyu detector inobvumira vanunuri kuti vaone vanhu vakavharirwa vakavigwa pasi pemarara, uye vadyidzane navo. Iyo ine imwe kamera inotenderera uye infrared kamera uye inogona zvakare kushandiswa kunyangwe munzvimbo ine rima. V5 Vhidhiyo Hupenyu Detector inogamuchirwa nemapoka ekununura kutenderera pasirese .Iinogona kupa yakajeka hurukuro uye vhidhiyo. Uye mifananidzo uye ...
A9 Hupenyu hupenyu detector
Overview Inoshandiswa pakutsvaga vashandi munzvimbo dzenjodzi dzakadai sekudonha kwechivako, uchishandisa isina simba odhiyo muteresi weiyo detector uye nezwi rekutaurirana system kuona nzvimbo nenzvimbo yevanhu vakasungwa, nekupa vanunuri neruzivo nezvevakabatwa pasi pematongo. kuburikidza nemasaini ekuteerera uye nekumisikidza kusangana kwezwi. Kunyorera Moto kurwira, kudengenyeka kwenyika, zviitiko zvegungwa, kununura kwakadzika tsime, dziviriro yevagari system Chigadzirwa Zvimiro Tsvaga uye ...